तपाईंको आजको राशीफल (बिहिबार २०७६ आषाढ २६) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय -
२०७६, २६ असार बिहीबार ०१:२५ July 11, 2019 clickonLeaveaComment on तपाईंको आजको राशीफल (बिहिबार २०७६ आषाढ २६) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय
पत्नीका मामिलाहरूमा आफ्नो नाक नबजाउनुहोस् किनकि यसले उनको रिस निम्त्याउन सक्छ। आफ्नो काम गरिरहनु ठीक हो। सकेसम्म कम हस्तक्षेप गर्नुहोस् अन्यथा यसले निर्भरताको सिर्जना गर्न सक्छ। अस्थायी ऋणका लागि तपाईंसँग भेट गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। घरेलु कामले तपाईंलाई अधिकांश समय व्यस्त राख्नेछ। प्रेमको शक्तिले तपाईंलाई प्रेम गर्ने कारण प्रदान गर्दछ। तपाईंले आफ्नो बुद्धि र प्रभाव कामका कुराहरू मिलाउने विषयमा लगाउनु आवश्यक छ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
आफैलाई सुहाउँदो र राम्रो राख्न बढी क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस्। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ – तर यसलाई आफ्नो हातबाट खस्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्। मित्र र आफन्तहरूले अझ बढी ध्यानको माग गर्नेछन् तर यो अरूलाई सहयोग नगरेर आफैलाई राम्रो व्यवहार गर्ने सही समय हो। आज आफ्नो प्रियलाई क्षमा गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईंले आफ्नो विचार राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो र काममा आफ्नो सङ्कल्प र उत्साह देखाउनु भयो भने – तपाईंलाई फाइदा हुने सम्भावना छ। एउटा लाभदायी दिन किनकि केही कुराहरू तपाईंको पक्षमा जाने देखिन्छ र तपाईं संसारको शीर्षमा हुनुहुनेछ। दिनमा गरम तर्क गरेपछि, आफ्नो जोडीसित रमाइलो साँझ बिताउनु हुनेछ।
हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो। ठूलो समूहमा आफूलाई संलग्न गराएमा अत्यधिक मनोरंजक हुनेछ – तर तपाईंको खर्च भने धेरै माथि पुग्नेछ। आफ्नो जिद्दी स्वभावले तपाईंको आमाबाबुको शान्ति भंग पार्न सक्छ। तपाईंले तिनीहरूको सल्लाह पालन गर्नु आवश्यक छ। गालीबाट बच्नको लागि आज्ञाकारी हुनु उचित छ। आफ्नो प्रेमीबाट टाढा रहन धेरै गाह्रो हुनेछ। तपाईंले नयाँ व्यापार साझेदारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिबद्धता गर्नु अघि हातमा सबै तथ्य प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। घरमा संस्कार हवन शुभ समारोह गरिनेछ। तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीलाई नभएर अन्य कसैलाई आफ्नो नियन्त्रण गर्ने मौका दिनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको प्रतिकूल प्रतिक्रिया पाउन सक्नु हुनेछ।
आध्यात्मिक जीवनको लागि जरूरी भएको तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्नुहोस्। राम्रो नराम्रो सबै दिमागको माध्यमबाट आउने हुनाले मन जीवनको द्वार हो। यसले जीवनका समस्याको समाधान गर्नमा मद्दत गर्छ र चाहिएको प्रकाश प्रदान गर्दछ। तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ – तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ। तपाईंको जिद्दी व्यवहारले घर र आफ्नो घनिष्ठ मित्रलाई पनि कलंकित गर्दछ। रोमान्सले तपाईंको हृदय र मनमा शासन गर्नेछ। आज तपाईंको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको धेरै प्रशंसा हुनेछ र अनपेक्षित पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। परमेश्वरले आफूलाई मद्दत गर्नेहरूलाई मद्दत गर्दछन् भन्ने तपाईं याद हुनु आवश्यक छ। आज तपाईं विवाहित भएको कारण आफैंलाई भाग्यशाली महसुस गर्नु हुँदैछ।
आफैलाई आशावादी हुन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यसले विश्वास र नम्रता बढ्छ तर त्यही समयमा डर, घृणा, डाह, बदला जस्ता नकारात्मक भावना छोड्न पनि तयार हुनुहोस्। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। परिवारका सदस्यहरूले धेरै मांग गर्नेछन्। तपाईंको प्रेम सम्बन्ध जादुले भरिएको हुनेछ; मात्रै यसलाई महसुस गर्नुहोस्। प्रतियोगिता आएको हुनाले कार्य तालिका व्यस्त हुनेछ। होसियारीसँग हिंड्नु पर्ने दिन – आज तपाईंको हृदयभन्दा मनको बढी आवश्यकता पर्नेछ। छुने, चुम्बन, अंकमाल आदि कुराको वैवाहिक जीवनमा विशेष महत्त्व छ। तपाईंले यसलाई आज अनुभव गर्नु हुनेछ।
आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नुहोस्। हल नभएका मुद्दाहरू कठिन बन्नेछन् र खर्चले तपाईंको मन मन ढाक्नेछ। घरेलु जीवन शान्तिपूर्ण र प्यारो हुनेछ। आज प्रेमको परमानन्दमा तपाईंको सपना र वास्तविकताको मिश्रण हुनेछ। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा कुराहरू आज साँच्चै सुन्दर छन्। आफ्नो जोडीको लागि रमाइलो साँझको योजना बनाउनुहोस्।
आफ्ना आशाहरू पूरा गर्न व्यक्तिगत सम्बन्धको दुरूपयोग गर्नाले तपाईंकी पत्नीलाई चिन्तित बनाउन सक्छ। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। आफन्तहरूको सहयोग प्रदान गर्नुहोस् र आफ्नो मन गह्रुँगो हुने चिन्ता हटाउनुहोस्। शरद ऋतुको रूख। अझै पनि कामको खिचलोले तपाईंको मन बेह्रेको छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै पनि समय निस्किन सकेको छैन। तपाईंमध्ये कसैले टाढाको यात्रा गर्नुहुनेछ – यो धेरै व्यस्त हुनेछ – तर अत्यधिक फलदायी पनि हुनेछ। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
आनन्ददायी यात्रा र सामाजिक भेलाहरूले तपाईंलाई तनाउमुक्त र खुसी राख्नेछ। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। आफ्नो राय छोराछोरीलाई जबरजस्ती थोप्नाले तिनीहरूलाई परेशान गराउन सक्छ। तिनीहरूलाई बुझाउनु राम्रो छ, जसले गर्दा तिनीहरूले यसलाई स्वीकार गर्न सकून्। कसैको लागि बिहेको बाजा र कसैले आफुलाई ठूलो सोखमा राख्ने रोमान्स पाउनुहुनेछ। आज काममा तपाईंको सफलताको दिन हुनेछ! आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूलाई यस्तो काम गर्न सक्नेछन् जसले गर्दा तपाईंको जीवनसाथी फेरी तपाईंमा समर्पित हुनेछन्।
कार्यस्थलमा वरिष्ठबाट दबाव र घरमा कलहले केही तनाउ ल्याउन सक्छ – जसले तपाईंका कामको एकाग्रतामा बाधा पुर्याउन सक्छ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। रमाइलो साँझका लागि मित्रहरूले तपाईंलाई आफ्नो ठाउँमा निमन्त्रण गर्नेछन्। तपाईं प्रेम प्रस्ताव राखेर धेरै खुशी हुनुहुनेछ किनकि यसले तपाईंको भारी हलुँगो पार्नेछ। अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुनाले वा धनको वर्षा हुनाले व्यवसायीहरूको लागि राम्रो दिन हो। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। धेरै दिनपछि तपाईं र तपाईंको जोडी फेरि एकअर्काको प्रेममा पर्नु हुनेछ।
तपाईंका जोडीको वफादार हृदय र साहसी जाँगरले आनन्द दिन सक्छ। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्ध बनाउने धेरै राम्रो दिन हो। एउटा परिवारमा संलग्न दुवै मानिसहरू प्रेममा पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र आफ्नो सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो पार्नुपर्छ। जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहोस् र सकारात्मक रूपमा कुराकानी गर्नुहोस्। आफ्ना प्रेमको अनावश्यक माग गर्न छोड्नुहोस्। सबै कुराहरू नपढीकन कुनै पनि व्यापार कानुनी कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवन नीरस भएको पाउन सक्नुहुनेछ। केही खुशी मनाउनुहोस्।
यदि तपाईं विगतका घटनाहरूको याद गर्नुभयो भने – तपाईंको निराशाले आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ – सकेसम्म धेरै आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। धेरै लाभदायक दिन होइन, आफ्नो पैसाको अवस्था जाँच गरेर आफ्नो खर्च सीमित गर्नुहोस्। तपाईंले परिवारमा शान्तिनिर्माताको जस्तै काम गर्नुहुनेछ। समस्याहरू नियन्त्रणमा राख्न सबैको समस्या सुन्नुहोस्। आज रोमाञ्चक दिन हुनेछ किनकि तपाईंले आफ्नो प्रियबाट उपहार इनाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो बुद्धि र प्रभाव कामका कुराहरू मिलाउने विषयमा लगाउनु आवश्यक छ। तपाईंले कसैलाई दिएको सहायताको इनाम वा स्वीकार प्राप्त हुनेछ यसैले आज तपाईं सबैको प्रसंशाको पात्र हुनुहुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवन राम्रो बनाउने प्रयासले आज आशा गरेकोभन्दा राम्रो फल दिनेछ।
आज तपाईंको भरोसा बढ्नेछ र प्रगति निश्चित छ। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। कसैका लागि – परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनले उत्सव र पार्टी ल्याउँछ। सामाजिक बाधाबाट छुटकारा पाउन असमर्थ। आज तपाईंसँग शक्ति रहनेछ र आफ्नो कमाउने शक्ति कसरी जुटाउने भन्ने थाहा हुनेछ। खुशीयाली यात्रा सन्तोषजनक हुनेछ। तपाईंको जोडीले नभएको वैवाहिक जीवन बारेमा तपाईंलाई परेशान गर्न सक्छन्।